समाचार Archives - Page 460 of 465 - कृषि पत्रिका
कृषि उपज बजार ऐन चाँडै ल्याउन माग
बिहिबार २३ भदौ, २०७३
काठमाडौँ। नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घले कृषि उपज बजार ऐन चाँडै ल्याउन माग गरेको छ ।महासङ्घले यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले कृषि उपज बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कानुन अभावका कारणले बजार व्यवस्थापन गर्न समस्या परेकाले ऐन चाँडै ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।“ऐन नहुँदा देशभरका बजार सञ्चालनमा समस्या परेको छ”, उहाँले […]
पशुमा कृत्रिम गर्भाधान वृद्धि न्यून
काठमाडौं। नेपालमा गएको वर्ष पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराउनेको संख्यामा न्यून वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा मुलुकभर ४ लाख ८७ हजार ९ सय १० पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएकोमा गत वर्ष ४ लाख ९३ हजार ५० वटा गाई–भैंसीलगायत पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको हो । गएको वर्ष अघोषित नाकाबन्दीलगायत मुलुकको असहज परिस्थितिले लक्ष्यअनुसार कृत्रिम गर्भाधान […]
अदुवाको निर्यातसम्बन्धी समस्या अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
बुधबार २२ भदौ, २०७३
काठमाडौँ । कृषि विकास मन्त्रालयले अदुवाको निर्यातसम्बन्धी समस्या अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन शाखाका उपसचिव डा.प्रधुम्न पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले वाणिज्य मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका […]
जुम्लामा हिमाली आयोजना असफल
जुम्ला। नेपाल सरकारले हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानको आयस्तर उकास्ने उधेश्यले संचालन गरेको हिमाली आयोजना जुम्ला जिल्लामा पूर्ण रुपमा असफल भएको छ। हिमाली आयोजनाअन्तर्गत महतगाउँ–२ मा सञ्चालित दिदीबहिनी गाईपालन फर्म सुनसान छ। त्यहाँ फर्मका लागि बनाइएका भौतिक संरचना भए पनि गाई छैनन्। त्यहाँ पालिएका गाईलाई दाना जुटाउन नसक्दा सबै सदस्यले गाई बाँडेर घरघरमा राखेका छन्। […]
अदुवा निकासीमा बाणिज्य मन्त्रालय निस्क्रिय हुँदा कृषि मन्त्रालयको सक्रियता
काठमाडौं। पूर्वका किसानको निर्यातमूलक मुख्य उत्पादन अदुवा निकासीमा अवरोध गर्दा समस्या सुल्झाउन सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै किसान निराश बनेका छन्। नेपाली किसानले भारत पठाएको अदुवामा चिनियाँ र विषादी मिसिएको बहानामा गत मंगलबारदेखि पूर्वी नाका काँकडभिट्टा, मेची भन्सारबाट निकासी रोकिरहेको छ। ट्रकमा लोड गरेर सीमा पुर्‍याएको र तयारी अवस्था राखेका अदुवा एक सातासम्म निकासी नहुँदा […]
लमजुङमा ८६ ओटा व्यावसायिक पशुफार्म थपिए
लमजुङ । लमजुङमा गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८६ ओटा व्यावसायिक पशुफार्म थपिएका छन् । पछिल्लो समय यहाँका पशुपालक किसान व्यावसायिक बन्दै गएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लमजुङले बताएको छ । जिल्लाका किसान बढी मात्रामा बाख्राफार्म र पोल्ट्री फार्मतर्फ आकर्षित भएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. दीर्घनाथ ढुङ्गानाले जानकारी दिए । आर्थिक […]
व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकको संख्यामा वृद्धिसँगै पशु बिमा गर्ने बढे
सिन्धुली। जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकको संख्यामा वृद्धिसँगै पशु बिमा गर्ने कृषकको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । गाउँगाउँमा कृषकले फर्म दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा पशुपालन सुरु गरेसँगै पशु बिमासमेत बढ्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा पशु बिमा ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालय प्रमुख डा. […]
पाँचथरमा गोलभेँडाखेतीबाट दश लाखसम्म आम्दानी
पाँचथर । पाँचथरको उत्तरी भेगका किसानले गोलभेँडा खेतीबाट रु दश लाखसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन् । जिल्लाको अमरपुर, पञ्चमी, नाँगी, थर्पु, भारपालगायत गाविसका कृषकले व्यावसायिक गोलभेँडा खेती गरेर वार्षिक प्रतिपरिवार डेढ लाखदेखि दश लाखसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् । जिल्लामा १२ हजार भन्दा बढीकृषकले गोलभेँडालाई नै मुख्य व्यावसायिक खेतीको रुपमा अपनाएको पाँचथर जिल्ल्ला कृषि […]
बंगुरको मासु विदेश निर्यात गर्ने तयारी
चितवन। नेपालबाट बंगुरको स्वास्थ मासु विदेश निर्यात गर्ने तयारी गरिएको छ । बंगुरको मासु पठाउने तयारी गरिएको केन्द्रीय बंगुर तथा कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालयले जनाएको छ । भारतको सिक्किम, भुटान र चीन लगायतका देशमा अहिले पनि सामान्य रुपमा मासु निर्यात भइरहेको छ । नेपालमा पालिएका उन्नत जातका बंगुरको मासु गुणस्तरीय र स्वास्थ्यवर्द्धक पाइएपछि मासु भुटानमा निर्यात […]